‘मि’ल्ने सा’थी’ सँग घ’रबाट नि’स्किएकी क’विता क’हिले न’फर्किने गरी अ’स्ताइन् ! – Sudur Samaj
‘मि’ल्ने सा’थी’ सँग घ’रबाट नि’स्किएकी क’विता क’हिले न’फर्किने गरी अ’स्ताइन् !
उदयपुर ; उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको कोसी जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत कविता सुनुवार यसपालि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा थिइन् । १६ वर्षकी कविता पढाइका साथसाथै बाहिरी ज्ञानमा पनि अब्बल थिइन् ।
कोभिड–१९ कहरका कारण लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा, एसईईको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीका लागि त्यति पढाइले मात्र पर्याप्त नभएका कारण विद्यालयले ट्युशन सञ्चालन गरेको थियो । त्यही ट्युशन लिन दिनहुँ बिहान ५ बजे निस्किने कविता कहिले नफर्किने बाटोमा गइन् !
सधैँ झैँ कविताकी मिल्ने साथी आज मङ्गलवार पनि झिसमिसेमै आएर कवितालाई बोलाएको दुवै साथी मिलेर ट्युशनका लागि हिँडेको कविताकी आमा शाेभाले बताउनुभयो। कविताकी आमाले भन्नुभयो, ‘यसरी योजना बनाएर लगेका रहेछन्, हामीलाई पत्तो भएन । कोचिङ पढ्नका लागि हिँडेकी छोरी खोलाको किनारमा मृत भेटिन्छिन् भन्ने कल्पना पनि थिएन ।’
दाजु–बहिनीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो
हत्याको अनुसन्धानका क्रममा कविताकी मिल्ने साथी बेलका नगरपालिका ३ कि साथी र उनका दाइ नाता पर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई प्रहरीले प्रारम्भिक सोधपुछ मात्र गरेको छ । दुवैलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्नका लागि सदरमुकाम गाइघाट
ल्याईएको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) निरीक्षक तेजप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । केही दिनअघि कविताकी साथीकी दाइ नाता पर्नेले कवितालाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए तर कविताले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन् । आज बिहान कविताकी साथीले फोन गरेर बोलाएपछि आफू पछिपछि गएको तिन (दाइ नाता पर्ने) ले स्वीकारेका छन् ।
प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेका कारण हत्या गरेको भन्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुले पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा नपुगेको इन्स्पेक्टर दाहालले बताउनुभयो । कविताको शव पोस्टमार्टमका लागि धरानमा रहेको वीपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको छ । कविताको हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापासहित जिल्लाका अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।
‘क’ठै दैन् ! आफ्नै साथीले ढुं’गाले हा’नेर क’बितालाई मा’रे’ ..
बिहानै आयो काठमाण्डाैबाट दु’खद खबर”